भैरहवा इपिएलको दोस्रो क्वालीफयरमा प्रवेश – Khel Dainik
भैरहवा इपिएलको दोस्रो क्वालीफयरमा प्रवेश
(तस्विर : विकेटनेपालं)
काठमाडौं (खेलदैनिक) । इलिमिनेटर भिडन्तमा चितवन टाईगर्सलाई ४ विकेटले हराउँदै भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स जारी एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) को दोस्रो क्वालीफायरका लागि छनौट भएको छ ।
किर्तिपुर मैदानमा टस जित्दै पहिले फिल्डिङ रोजेको भैरहवाले चितवनलाई निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १३९ रन मात्र बनाउन दियो । चितवनका लागि दिपेन्द्र संह ऐरी एक्लैले ५६ रन बनाउँदै अर्धशतकीय पारी खेले ।
बलिङतर्फ भैरहवाका लागि मोहम्मद नाविदले ३ विकेट लिए भने अविनाश बोहराले २ विकेट हात पारे । त्यस्तै रेयान टेन डसचेट, कृष्ण कार्की र भुवन कार्कीले समान एक–एक विकेट लिए ।
18.2 Bhandari to Paudel, FOUR runs,
Paudel finished it likeaboss !
Quick 50 partnership from Kushal Malla and Rohit Paudel sealsavictory for Bhairahawa Gladiators !
— WicketNepal (@WicketNepal) December 19, 2018
उता जवाफी लक्ष्य पछ्याएको भैरहवाले १८.२ ओभर खेल्दै ६ विकेटको क्षतिमा १४२ रन बनाएर जित हासिल गरेको थियो । भैरहवाका लागि म्यान अफ द म्याच समेत घोषित ओपनर प्रदिप ऐरीले ४२ रनको महत्वपूर्ण पारी खेल्दै जितको आधार तयार पारेका थिए । त्यस्तै तल्लो क्रमका कुशल मल्ल र रोहित पौडेलले क्रमश २७ र २४ रनको नटआउट पारी खेल्दै भैरहवाको जितमा महत्वपूर्ण योगदान दिए । त्यसअघि कप्तान शरद भेषवाकरले पनि २९ रन बनाए ।
बलिङतर्फ चितवनका लागि कमल सिंह ऐरीले सर्वाधिक ३ विकेट लिंदा दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कमल भण्डारीले समान १–१ विकेट आफ्नो नाममा लेखाए । यो जितसँगै भैरहवाले अब भोली बिहीबार काठमाडौं किंग्ससँग दोस्रो क्वालीफायर खेल्नेछ । दोस्रो क्वालीफायरमा बिजयी हुने टोलीले शनिबार ललितपुर प्याट्रिअट्ससँग उपाधिका लागि फाइनल खेल्नेछ ।
← नेकोस अन्तर्राष्ट्रिय जुडो शुक्रबारदेखि जलथल एफसी, झापा क्वाटरफाइनलमा →
एएफसी कपमा किरनको टोली माजियाको जित पुष ४, २०७५
पाँचौं माडी कप विद्यालय फुटबल शुरु पुष ४, २०७५
पाँचौं खेलमा एभनिर विरुद्ध नेपालको जित पुष ४, २०७५
सिरिज गुमाए पनि नेपालको सुखद समापन पुष ४, २०७५
अन्ततः जकार्ताबाट अलग भए रोहित पुष ४, २०७५
प्रथम चाउथे कप शनिबारदेखि पुष ४, २०७५